China 4㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER ifektri abakhiqizi | I-JCT
4㎡ ISOLAR MOBILE LED TRAILER
Imodeli: E-F4 SOLAR
I-trailer ehamba phambili ehamba phambili eyi-4m2 yelanga （Imodeli: E-F4 SOLAR） okokuqala ihlanganisa ukukhanya kwelanga, ukukhanya kwesikrini sangaphandle esigcwele sombala kanye nezinqola zokukhangisa zeselula ndawonye zibe yinto ephelele.
4m2 i-trailer yeselula ehamba phambili yelanga（Imodeli: E-F4 ILANGAOkokuqala ihlanganisa i-solar, i-LED yangaphandle yesikrini sombala ogcwele kanye nezinqola zokukhangisa zeselula zihlangene ngokuphelele. Isebenzisa ngqo amandla elanga njengokunikezwa kukagesi okungaphazanyiswa, okuphephile, okuthembekile, okusebenzayo, okunikela kakhulu emvelweni futhi ngokuhambisana nenqubomgomo entsha yokonga ugesi, kwephula imingcele yemodi yakudala yokuphakelwa kwamandla edinga ukuthola ugesi wangaphandle noma ama-generator.
Isikrini esiholelekile esingu-360 degree
Inkampani ye-JCT ngokuzimela ithuthukisa izinsika zomhlahlandlela ojikelezayo ukuhlanganisa uhlelo olusekelayo kanye nokuphakamisa uhlelo lokubhoboza kanye nokujikeleza ndawonye okuqonda ukujikeleza okungama-360 degree ngaphandle kwe-angle efile, ukuqhubeka nokwenza ngcono ukuxhumana, futhi kulungele ikakhulukazi idolobha, umhlangano, imicimbi yezicelo eziminyene njengenkundla yezemidlalo yangaphandle .
Ukubukeka kwemfashini, ubuchwepheshe obunamandla
Esikhundleni sesitayela se-streamline semikhiqizo yangaphambilini, ama-trailer amasha asebenzisa ukwakheka okungenachashazi ngemigqa ehlanzekile necocekile nemiphetho ebukhali, ekhombisa ngokuphelele umqondo wesayensi, ubuchwepheshe kanye nokwenza izinto zibe sesimanje. Ilungele ikakhulukazi umqhubi wezimoto, umbukiso we-pop, umbukiso wemfashini, ukukhishwa komkhiqizo omusha wemoto ngogesi, njll.
Kungeniswe uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi, luphephile futhi luzinzile
4m2I-trailer yeselula ehamba phambili yelanga isebenzisa uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi olungenisiwe olunokuphakama okungu-1m kohambo futhi luphephile futhi luzinzile. Ukuphakama kwesikrini se-LED kungashintshwa ngokuya ngezidingo zemvelo ukuqinisekisa ukuthi izethameli zingathola i-angle yokubuka engcono kakhulu.
4m2I-trailer ehamba phambili yelanga ehamba phambili ifakelwe idivaysi engenawo amandla nokubhidlika ngesandla, futhi ingadonswa ukuze ihanjiswe yimoto ukwenza ukusakaza nokwazisa. Ukwakhiwa kwemishini yemilenze esekelayo kulula futhi kuyashesha ukusebenza.
Ukunikezwa kwamandla elanga nebhethri
4pcs 180W amaphaneli elanga. Isibonelo, isikhathi esisebenzayo sokushaja kwelanga sibalwa njengamahora ama-5 ngosuku. 180 * 4 * 5 = 3600W, la mandla angahlala usuku olungu-1. Kuyinto esimeme ezinsukwini libalele nge 12pcs 2V 400AH amabhethri.
4m2Ama-trailer ahamba phambili elanga anezindlela zokuphakela ugesi ezizimele nezingaphazamiseki nokusebenza okuphezulu. Kuphephile, kunokwethenjelwa, kuzinzile, akunamsindo, kuyasebenziseka kwezemvelo futhi akukhawulwanga yizindawo.
1. Usayizi: 2700 × 1800 × 2300mm, Inertial device: 400mm, Tow bar: 1000mm
2.Usayizi wombala ogcwele wangaphandle osindisa isibuko se-LED (P10) usayizi: 2560 * 1280mm
3. Uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi: I-Italy ingenise amasilinda wokubacindezela, ukuphakama kokuhamba okungu-1000m.
Ukusetshenziswa kwamandla 4.Power (ukusetshenziswa okulingene): 50W / m2 (kulinganiswe).
5. Uhlelo lwevidiyo ye-Multimedia: Ukusekela i-4G, i-U disk, amafomethi wevidiyo ajwayelekile.
Imodeli I-E-F4 Solar（4m2 I-SOLAR MOBILE LED TRAILER ）
Umkhiqizo I-JCT Usayizi Wangaphandle I-2700mm (L) x1800mm (W) x2300mm (H)
Ibhuleki Isandla / umfutholuketshezi ITire Amasondo enjoloba aqinile
Imilenze yokusekela 4pcs
Isikrini sokonga amandla se-LED
Usayizi Wesikrini 2560mm (W) * 1280mm (H) Dot Pitch 10 mm
Module Usayizi I-320mm (W) * 160mm (H) Ukukhanya ≥5500cd / m²
Amandla AmandlaUkusetshenziswa 150W / m2 Isikhathi sokuphila Amahora 100,000
Umfutholuketshezi Lifting System Ukuphakamisa ububanzi 1000m
Umfutholuketshezi Rotating System Isikrini singazungezisa ama-degree angama-360
Iphiko eliphikisana neleveli Ngokuphikisana nomoya weleveli 8 ngemuva kokuphakamisa isikrini ngo-1000mm
Usayizi 1480mm x 670mm * 4pcs Amandla 180W * 4 = 720W
Amandla wokufaka 9-36V Amandla wokukhipha 24V
Kukalwe amandla okushaja 720W / 24V
Amandla amakhulu we-photovoltaic array 1170W / 24V
Umdlali I-Nova TB4-4G Ukuthola ikhadi I-Nova MRV316
Inzwa ye-Luminance Nova
Langaphambilini 2㎡ ISOLAR MOBILE LED TRAILER
Olandelayo: I-trailer ye-VMS- umbala ogcwele
Ama-Trailer Ahamba Solar Mobile
I-JCT 6.2m ledrade yasesiteji eho- Foton Aumark
6m Ucingo Exhibition Truck-foton Aumark
I-JCT 9.6M LED STAGE TRUCK-Foton Aumark
Itekisi ekhombisa iwindi elingemuva lokubonisa
Ucingo Led Screen Truck, Led Ucingo Truck Ukudayiswa, Led Ucingo Truck, Led Ucingo Trailer, Ucingo Led Advertising Truck, Ucingo Led Billboard Truck,